5 zvishandiso zvekutenga vateveri pa Twitter | ECommerce nhau
5 zvishandiso zvekutenga vateveri pa Twitter
Iyo pasocial network inoda vateveri. Ndicho chinoita kuti ikure, kuti vanhu vazvione uye kuti inogona kutobatsira kune vanoitakura. Uye hazvina basa kana iri Twitter, Facebook, Instagram ... nhasi vanhu vese vane maakaundi pama network akasiyana siyana uye vanovashanyira kazhinji zuva rese. Asi, mune iyo nyaya yeTwitter, nekuda kwekumhanya kwayo, nekukurumidza ..., zvinonyanya kushandiswa kutaura pamusoro pezvinhu zvenguva iyoyo. Uye zvechokwadi, kutaura wega hakusi kwakanyanya kunaka. Saka vazhinji vanoshandisa zvishandiso zvekutenga vateveri pa Twitter.
Asi zviri pamutemo here? Uye chii chiripo? Tichakurukura izvi zvese uye zvimwe zvakawanda pazasi.
1 Nei uine vateveri pa Twitter
2 Tenga vateveri veTwitter: chaicho kana zvipoko
3 Saka, unogona kutenga vateveri here?
4 Zvishandiso zvakanakisa zvekutenga vateveri pa Twitter
4.3 Vatengi vanotevera
Nei uine vateveri pa Twitter
Paunotanga pasocial network, ingave iyo Twitter, Facebook, Instagram ... iwe uri wega uri woga pane uya. Saka chero iwe chaunotumira, hapana anozochiona. Iwe chete. Uye izvo hazvizove izvo zvaunoda.
Chimwe chezvinyorwa Zvinangwa zvekuve nevateveri paTwitter, sekune chero pasocial network, hazvizivikanwe. Ndokunge, kuti vanhu vanokucherechedza, vanokuverengera, vanoita kune izvo iwe zvawakaisa (zvirinani uye nezvakaipa, hongu). Hazvisi nyore sekufunga kwako, nekuti iwe unofanirwa kuzvivaka zvishoma nezvishoma, uye uwane iro rakakodzera iro rako.
Asi zvakare, chimwe chikonzero chekuve nevateveri paTwitter kugona kusvika kune "vepamusoro" kutanga kugogodza pamikova emakambani. Mune mamwe mazwi: chii makambani anokubhadhara iwe kuti uve anokurudzira. Vazhinji havatsvage izvi, uye vanongoda kuti zvirevo zvavo zvisvike kumamiriyoni evanhu; asi vamwe vanoziva kugona uko masocial network ari uye vanoda kutora mukana wavo.
Ehezve, kuti uwane izvi, iwe unoda vateveri.
Tenga vateveri veTwitter: chaicho kana zvipoko
Panguva ino, ndinofunga kuti munhu wese akamboziva pane imwe nguva nhoroondo yakafemerwa yevateveri uko pasina anotaurisa, uye kana iwe ukaona ndiani anokutevera iwe unoona kuti iwo maprofiles asina mufananidzo, asina zvinyorwa, kana ane pikicha uye chinyorwa asi mune mumwe mutauro. Tinobva taziva kuti ndizvo zvazviri "Vateveri veMweya", inonziwo "nyepera."
Twitter haigone kudzora izvi (semamwe ma social network), uye izvo zvinobvumidza vazhinji, kuitira "kukodza" yavo portfolio yevateveri, vanokurudzirwa kutenga vateveri, asi kwete zvakasikwa asi venhema.
Inogona kuita sei? Fungidzira mamiriro acho: une account yeTwitter nevateveri miriyoni imwe. Izvi zvinoita kuti account yako ibude pachena. Asi, iwe paunotumira tweet, vanhu 1-2 chete ndivo vanokupindura. Kana hapana. Vanhu havanzwisisike uye vachaona vateveri vako. Uye, kushamisika! Mazita asinganzwisisike, mune mimwe mitauro, hapana pikicha, maprofayiri akavanzika ... Zvinotaridza kuti nhamba yemiriyoni imwe ndeye vanhu gumi kusvika gumi, vamwe vese havapo.
Uye izvo zvinokonzeresa kuti munhu iyeye aifunga kuti uri "guru" weTwitter, apedzisire achikusiya nekuti unonyepa.
Saka, unogona kutenga vateveri here?
Hongu uye kwete. Kutenga vateveri chaivo kunobatsira account yako nekuti ivo vanopa yekufona kune vamwe. Semuenzaniso, fungidzira uine vateveri chiuru, uye iwe unotenga zviuru zviviri. Akaunti yako ichatanga kunzwikwa zvakanyanya, vanhu vachatora kutarisisa kwauri, uye izvozvo zvinomutsa mhinduro kune vamwe vanozouya kuzoona kuti sei uine vateveri vakawanda, ivo vanokutevera uye pakupedzisira nhamba dzako dzichafuta.
Muchokwadi, kutenga vateveri hachisi chinhu chinoitwa nevanhu chete, futi. Inoitwa nevanhu vanozivikanwa, vanoblogi, makambani, vanamuzvinabhizimisi uye hongu, vezvematongerwo enyika zvakare. Saka haifanirwe kunge yakaipa kwazvo, handiti? Kunyangwe isu tiri kunyatso kutaura nezve bakatwa rinocheka nekwose. Ichokwadi kuti kuve nevateveri vakabhadharwa kunobatsira avo chaivo kuti vatevere nekudyidzana newe. Asi kuti ivo vagare, iwe uchafanirwa kupa chimwe chinhu chakanakisa icho chinosvikira kune iyo nhamba yevateveri.
Zvishandiso zvakanakisa zvekutenga vateveri pa Twitter
Zvakanakisa. Iwe waita sarudzo yekutenga vateveri veTwitter. Zvino, huwandu hunogona kukunda pamusoro pehunhu. Kana neimwe nzira. Ndokusaka paine sarudzo dzakawanda kwazvo kwaunogona kuwana izvo zvauri kutsvaga: vanhu vazhinji vanokutevera.
Mune ino kesi, isu ticha taura nezve zvishandiso zvishanu izvo isu zvatinofunga zvakanakisa kudyara mu network.
Iri peji rave kumusoro uye richimhanya kwechinguva uye raita zvakati wandei zvekutengeserana kare. Mutengo waro wakaderera, chete $ 20 pa1000 vateveri kubva kuTwitter, uye zvakare unogona kusarudza nyika yekubva. Nekudaro, kana iwe uchigara kuSpain, uchave uine vateveri veSpanish, kwete kubva kune imwe nyika.
Ehezve, iro peji, zvirinani kana tavhura, harina kubuda zvakanyatsonaka saka hatizive kana richiri kushanda uye roga kana kwete. Mune ino kesi, zvirinani uzive zvisati zvaitika.
Iri peji rinokutendera iwe kuti utenge vateveri pane akasiyana masocial network senge TikTok, Instagram, Twitter, Youtube uye Facebook. Muchiitiko chevateveri paTwitter, ivo vanodhura, nekuti tiri kutaura nezvazvo $ 50 pavateveri ve1000, $ 140 ye4000.
Rimwe peji, iro zvakare rakashambadzirwa nenhamba 1 yekutenga vateveri paTwitter. Zvinoenderana nezvazvinowanikwa mukupihwa, haufanire kupa password (haufanire kuzviita), kana kutevera mamwe maakaundi, pamusoro pekuwedzera vateveri.
Uye ine mitengoi? 1000 vateveri i $ 22; 5000, 99 madhora; uye zviuru gumi zvichakutengera madhora 10000. Zvino, kana iwe uchida vateveri vakakamurwa, mutengo uchakwira sezvo unenge uri wekutenga wakasarudzika uye uchafanirwa kutaura navo kuti uwane quote.
Iyo ndeimwe yemapeji akazara kwazvo kutenga vateveri veTwitter, asiwo Facebook, Instagram, YouTube uye nevamwe vazhinji. Uye zvakare, inopa mamwe masevhisi sekutenga webhu kana adsense traffic, kumisikidza, kubvisa makwikwi mavhidhiyo, makomendi paYouTube, kutenga otomatiki retweets ...
Panyaya ye Twitter, Iwe haugone chete kutenga vateveri, asiwo vateveri ve Twitter bots, gadzira Trendy Topic ... Mutengo wayo, mune yekutengwa kwevateveri ndeye gumi euros pavateveri chiuru (10 euros pa 1000). Ivo vese vangave vateveri vepasirese uye, zvinoenderana nezvazvinotaura pane peji, ivo vanopupura kuti ivo vashandisi chaivo. Kana iwe uchida nyika imwe chete, mitengo inochengetedzwa (nekudzvanya nyika yaunoda, unogona kuwana vateveri).
Iyi ndiyo imwe yemaakaundi akajairwa uye, kusiyana nemamwe, yakavakirwa pane inotevera, Ndokunge, ini ndinotevera mumwe uye mumwewo anonditevera, saka sekutevera kwevateveri vako, saizvozvo vanhu vaunotevera.
Chinhu chakanaka pamusoro penyaya iyi ndechekuti iwe unozotevera vanhu vauri kunyatsofarira kutevera, semuenzaniso nekuda kwako. Uye zvakafanana zvichaitika nevateveri, vachazviita nekuti vane hanya newe, saka mese munohwina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » 5 zvishandiso zvekutenga vateveri pa Twitter
Chii chinonzi kudzokorodza?
Chii chinonzi inventory manejimendi